Manavao ny sidina mankany Johannesburg ny Air Madagascar
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Manavao ny sidina mankany Johannesburg ny Air Madagascar
Nanambara ny Air Madagascar fa hiverina ny sidina manelanelana Antananarivo sy Johannesburg, manomboka ny 17 jona.
Ny sidina teo aloha dia nanidina tany amin'ny foibe indostrialy sy varotra lehibe any Afrika Atsimo saingy nijanona ny sidina tamin'ny 2015 raha nijanona teo amin'ny sisin'ny antsy ny asa fitohizan'izany.
Ny sidina kasaina hatao dia hiara-hiasa amin'ny fiaramanidina Boeing B737-800NG manompo ny zotra voalohany indroa isan-kerinandro. Avy eto Antananarivo no mampifandray sidina manerana ny nosy dia ho hita eo amin'ny toerana misy azy toa an'i Nose Bay.
Nihatsara tokoa ny zotram-piaramanidina hatramin'ny nanatevin-daharana ny fiaraha-miasa tamin'ny Air Austral monina any La Réunion.
FAA amin'ny rafitra fikarohana drone seranam-piaramanidina